Apple inoronga kuwedzera Apple Store yayo paFifth Avenue | Ndinobva mac
Apple inoronga kuwedzera Apple Store yayo paFifth Avenue
Jesu Arjona Montalvo | | Apple Store, Noticias
Apple iri kutsvaga kuwedzera yayo Apple Store insignia pachivara Fifth Avenue muNew York, maererano neshumo nyowani. Iyo kambani inoti iri kutsvaga kuvaka "Chikamu kana zvese" yeiyo 61.000-square-tsoka (anenge 5.667-mita-mita-mita) nzvimbo mune GM chivakwa (Fifth Avenue), asi sezviri pachena haidi kubhadhara mutengo wakazara kuti kugadzirisa kunosanganisira.
Haisi chete iconic yeApple Fifth Avenue chitoro chimwe chakabatikana, yave zvakare kukwezva kukuru kwevashanyi yeApple vadikani. Saka vashanyi vazhinji vanouya zuva rega rega zvekuti Apple ikozvino inoda kuwedzera iyo Apple Chitoro, sekureva kwe 'New York Post'.
Kunyangwe ichida kuita shanduko, Apple iri kuronga kuzviita kwenguva pfupi. "Asi pane dambudziko kana zvasvika pakuwedzera zvachose"inowedzera mushumo. "Apple haidi kubhadhara mutoro wemutengo iwoyo nekuti inonzwa kuve nekodzero yekuuwana, sezvo iri nzvimbo yepasi rese yevashanyi."
Chivako ichi chine muridzi 'GM Boston Zvivakwa', ine vatengesi vakuru uye vagovani. Izvi zvinoreva kuti iwe haugone chete kupa mukuda kweApple, asi iwe unogona kuda iwo mutengo.
Uye munzvimbo iyoyo yeManhattan, iyo isingadhuri sezvaungafungidzira, iyo nzvimbo pane yepasi pasi inotangira kubva $ 2.700 a $ 4.450 pamakumbo mana akaenzana (0,092903 mativi emamirimita), uye chivakwa cheGM chine 1.207 mativi emamita pane pasi pevhu. Izvi zvinoreva kuti ichave inodhura kwazvo kune Apple, kunyangwe pamitengo yakaderera.
Nike inotendwa inofarira nzvimbo zvakare, asi hazvizove zvakakosha kusvika 2020, kana risi yako yapera. Izvo zvaizopa Apple nguva yeku kwenguva pfupi shandura akadaro shanduko uye ita kuwedzera kwayo paFifth Avenue.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Store » Apple inoronga kuwedzera Apple Store yayo paFifth Avenue
Nyudza muWWII ne'Batstations: Pacific ', iri kutengeswa kwenguva shoma
Nyowani Apple keyboard patent, OS X 10.11.5, zvitoro zvitsva muIndia, Zuva Rekuwanika uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac